Spears & Munsil Qeexitaan Sare Benchmark Blu-ray Nuqul Labaad - MediaLight Eex Nalalka
Bogga ugu weyn Spears & Munsil Qeexitaan Sare Benchmark Blu-ray Second Edition
Spears & Munsil Qeexitaan Sare Benchmark Blu-ray Second Edition
Haddii aad tahay laylis tiyaatarka guriga ah ama aqoonyahan xirfadle ah, waxaad ka heli doontaa dhammaan imtixaannada aad u baahan tahay si aad u dejiso oo aad u hagaajiso HDTV-gaaga Spears iyo Munsil HD Benchmark.
Daabacaaddii hore ee 'HD Benchmark' waxaa kugula taliyay New York Times, Dib-u-eegis ballaaran, Majaladda Tiyaatarka Guriga iyo daraasiin kale oo daabacan iyo daabacado internetka ah. Daabacaaddan cusub waxay haysaa dhammaan astaamihii saxankii hore waxayna ku dareysaa daraasiin astaamo cusub, oo ay ka mid yihiin:
• Qaababka qiimaynta 3D ee stereoscopic-ka iyo qaababka qiimaynta
• Tijaabooyin maqal ah oo loogu talagalay dejinta afhayeenka, qalabaynta, iyo isku xidhka A / V
• Qaababka dhaqdhaqaaqa si loo qiimeeyo hababka isdhexgalka ee 120Hz iyo 240Hz
• Caawinaad dheeraad ah oo loogu talagalay bilowga tiyaatarka guriga
• Qaabab badan oo loogu talagalay adeegsadaha horumarsan ama qalab-yaqaan xirfad-yaqaan ah
Spears iyo Munsil HD Benchmark waa aalad aad u fiican oo aad ku qalabayn karto arsenal! Qaab kasta waxaa loo sameeyay iyadoo la adeegsanayo qalabka softiweerka ah ee Spears iyo Munsil qalabkiisa aadka u sarreeya ee saxda ah wuxuuna u taagan yahay gobolka farshaxanka taranka fiidiyowga.
Ogsoonow in dhammaan qaababka 3D u baahan yihiin 3D Blu-ray Disc player iyo telefishanka 3D. Qalabka 2D wuxuu ku ciyaari doonaa qalab kasta oo Blu-ray Disc ah.